ပန်ဒိုရာ: 19 June 2007
Posted by pandora at 10:31 PM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံတူက ဒီမှာ အနီးကပ်ကြည့်မှ ပိုတူတာပဲ။ တော်တော်လေးကို အားထုတ်ဆွဲရမယ့် သဘောရှိတယ်။ လေးစားပါ၏။ ဒီနေ့ကတော့ ဘလော့ဂ် အတော်များများ ဆုတောင်းသံတွေ ညံနေတယ်။ :)
မပန်က တော်လိုက်တာ ဘက်စြံပဲ။ ဘယ်ဘက်က စမ်းစမ်း ညာဘက်က စမ်းစမ်း အရိုး ချည်းပဲ...အဲဟုတ်ပေါင်။ စွယ်စုံရ တာပဲ ဟီး။
အရမ်းတော်တယ်ဗျာ. အထူးသဖြင့် သူ့မျက်လုံးလေးတွေကို ကြည့်ရတာ အသက်ဝင်လိုက်တာ.
Wow! It’s so cool...!!
paintလို မျိုး စတိ ဆော့ဖ၀ဲလေး နဲ့ ဒီလောက် ထွက်တာ တော်တော် မလွယ်တဲ့ အလုပ်ပါ။
ဟုတ်တယ် လက်ငြိမ်ဖို့ မလွယ်ပါ။ အရင် က ကျွန်တော် digital pencil tracer နဲ့ဆွဲဖူးတယ်။ အရမ်းကောင်းတယ်။ စုတ်တံနဲ့ ခဲတံနဲ့စာရွက်ပေါ်မှာ ခဲခြစ်ရသလောက် အဆင်ပြေတယ်။
အခုတော့မရှိတော့လဲ မောက်စနဲ့ ပဲဆွဲရတော့ လက်မသွက်ပါ။ ကျွန်တော်နည်း ကတော့ MS paint မှ brush tool နဲ့ ဆွဲတယ်။ line tool ကမျဉ်း ကွေး sketch တွေအတွက် မကောင်းပါ။ Brush tool ကို brush sizeနည်းနည်း တုတ်တဲ့ mediumနဲ့ သုံးပါတယ်။ ပြီးတော့ normal view မှာ မဆွဲပဲ zoom ကို ၂ ဆ နဲ့ ၆ ဆ ခဲလုံးနဲ့ ဆွဲမယ့် နေရာ ခဲသားပေါ်မူတည်ပြီး zoom mode မှာ ပဲဆွဲတယ်။ အဲဒါဆိုရင် ဆွဲရတဲ့ လက် က လက်သွားတဲ့sketch နှုန်း ကို ပို သွက်ပြီး ပို smooth ဖြစ်တယ်။ စမ်းကြည့်ပါလား..
မပန်ရေ.. အရမ်းတူတဲ့ ပုံတူပန်းချီပါပဲ ။ Paint software နဲ့ ဆွဲနိုင်တာ တကယ်တော်တယ် ။
ကိုစေးထူး > ဟုတ်တယ်.. အတော်တော့ အားထည့်ရသား။ သေချာမှ မဆွဲတတ်တာကိုး။ ဆွဲချင်စိတ်ပဲရှိတာ။ ဟီး။
ပုံရိပ် > အာ..လာမစမ်းနဲ့..ယားတတ်တယ်ဟ။
မောင်ရန်ရေ > အဲဒီမျက်လုံးကို အတော်ဆွဲရတယ်။
ကိုမောင်ရင် > အခုလို အသေးစိတ်လေး ရှင်းပြတာ ကျေးဇူး. ပိုကြိုးစားပြီး စမ်းကြည့်ပါဦးမယ်။
ဂျစ်> တခါတလေ လက်တည့်သွားတာပါ
အားပေးသူများ အားလုံးကျေးဇူးပါ။ အမှတ်တရ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြည့်လိုက်တာပါ။
အနော့်ဒေါင်းပုံဆွဲတုန်းကလည်း ဒီလိုပဲ တော်တာပဲ.. အမကို ချီးကျူးပါတယ်ဗျာ
I’m sure you areapolitical animal too.
ပုံဆွဲကောင်းတယ်ဗျို့.. အားကျတယ်ခင်ဗျာ.. ကိုယ်တိုင်ရေးပုံတူလေးလည်း တွေ့ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.. တောင်းဆိုတာပါ..
Can I send my pic to you? :D
AMaySu lo hlahla lay swel pay
wahhhhh... so nice sketch lah..
u sure got lots of talent in you.
envy us sis!! waytogooooo
မောင်ဒေါင်း.. ချီးကျုးတာ ကျေးဇူးပါ။ တိုက်ဆိုင်ရင်တော့ တူတတ်ပါတယ်။
ကိုမျက်လုံး.. ကိုယ်တိုင်ရေးပုံတူက မညာတမ်းဆွဲမှ ဆွဲနိုင်တာ။ မဖြစ်သေးဘူး ထင်တယ်.. ပြီးတော့ ပန်ဒိုရာက ကိုယ့် မျက်နှာ ပြရမှာ နည်းနည်းရှက်တတ်တယ်.. ဟဲဟဲ..
မလေး.. ဆွဲပေးမှာပေါ့.. လှလှလေး ရိုက်ပြီးပို့လိုက်.. အဲ.. ပြီးရင်တော့ ဘလော့ဂ်မှာ တင်ရမယ်နော်..
ဘာညာကောင်ပေါက်.. နာ့ညီမလေး ရေခဲချောင်းကျွေးမယ်..
တကယ့်ရွက်ပုန်းသီးအနုပညာရှင်တွေကို တွေ့ နေရတာပဲ။
သိပ်တော်တဲ့ ကလေးတွေမို့ 
မမကြီး ခင်ရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
ပန်ရေ…ဆွဲဖို့ တွန်းအားပေးတဲ့စိတ်ကလေးကိုရော၊ လက်ရာမြောက်တဲ့ပန်းချီလေးကိုရော လေးစားမိပါတယ်…
Btw, အပေါ်က comment timestamp တွေတမျိူးဖြစ်နေသလားလို့ ….
မပန်က ကဗှာ၊ ဝတ္ထုတင်မဟုတ် ပန်းချီပါရသကိုး။ စွယ်စုံ အနုပညာရှင်ပေါ့း-)
ကြိုက်လို့ ကြယ်ငါးပွင့် ပေးခဲ့တယ်ဗျို့ ။